musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Colombia Yakarohwa ne 6.0 Earthquake
Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kudengenyeka kwenyika muColombia
Kudengenyeka kwenyika kwakakura 6.0 kwakarova Korombiya nhasi, Zvita 24, 2019, pa 19:03:52 UTC ichizunza zvivakwa muguta guru, Bogota. Izvi zvinoita kuti 2 kudengenyeka kuitwe muSouth America nezuva rimwe chete, sekudengenyeka kwenyika kwakaenzana yakarova Argentina maawa mashoma apfuura.
IU.S. Geological Survey yakati kudengenyeka kwenyika kwaive kwakakomberedza mamaira zana kumaodzanyemba kweBogota padyo neguta reLejanias. Kudengenyeka kwe100 kwakayerwa padyo nemaminitsi gumi nematanhatu.
Sezvo kudengenyeka kubva pakudengenyeka kwenyika kwekutanga 6.0 kwakapera, maungira akarira muguta reBogota.
Panga pasina kuziviswa nezvekukuvara kana kukuvara.
Kudengenyeka kwacho kwaive pakadzika kwemakiromita gumi munzvimbo dziri pedyo nenzvimbo idzi:
4.8 km (2.9 mi) SSE yeLejanias
33.4 km (20.7 mi) W yeGranada
40.6 km (25.2 mi) SW yeSan Martin
61.3 km (38.0 mi) SSW yeAcacias
83.3 km (51.6 mi) SSW yeVillavicencio